pound indoda - Iponti
Ulwazi malunga neLibra Man x
Xa indoda yaseLibra ithandana, iya kuwubona umbandela wothando lwayo njengomntu eza kutshata naye. Unokuxhomekeka kakhulu ekuziveni enomtsalane kwaye ethandwa, kodwa uya kwazi ukuba uyakuthanda xa eqala ukuthetha ngomtshato. Oku kunokwenzeka ekuqaleni kobudlelwane kunye nendoda yaseLibra inokuhamba ngokukhawuleza, isoyikisa iqabane layo kunye nezinto ezilindelekileyo ezibonakala zingekho. Esi sisiphumo se-Air element ye Iponti oko kunika le ndoda isantya kunye nenjongo, kunye nesidingo sokulandela iingcamango zayo. Into engakholelekiyo ngaye kukukwazi kwakhe ukukhawuleza kuthando kunye nomtshato nangona uphawu lwakhe luphakamisa uSaturn kwaye sinokulindela ukuba anciphise kwaye alinde ixesha elifanelekileyo. Omnye umntu angatsho ukuba akayi kuthabatha izinto ngokulula, kodwa inyaniso kukuba akanakuchitha ixesha lakhe kubudlelwane obungenakamva okanye ubunzulu. Uvele acinge ukuba kubhetele azazi apho ame khona ngoko nangoko.
Indoda yaseLibra ingaba ngumnye wabathandi ababalaseleyo bezodiac, ukuba kuphela iLanga lakhe alilonakali kakhulu. Ulawulwa nguVenus, uyakhathala malunga nolonwabo lomlingane wakhe, kwaye uthanda ngokwenene ukwaneliseka kokuyila emva kwesenzo. Kwimeko apho indoda yaseLibra ineLanga eyonakele ngokwenene, inokuzicingela ngokumangalisayo kwaye ingakwazi ukwenza ubudlelwane obusondeleyo. Ingxaki enkulu ivela xa ethembele kakhulu kwiSaturn, esemthethweni kakhulu, engqongqo, ebanda okanye eqinile. Oku kunokukhokelela ekuphelelweni amandla kunye nezinye iingxaki ngokubonisa ubulili bakhe ngendlela ephilileyo.
Nge-ego ephukile, indoda yaseLibra inokwenza njengomntwana omncinci, othukwayo. Kuthatha umzamo omkhulu kunye neemeko zosapho ezinethamsanqa ebomini bakhe, ukuba aqonde ukuba ayizizo zonke izinto ezisisithuko sobuqu esijonge ukumenzakalisa. Nokuba imeko injani na kwisebe lezothuko, le yindoda ehlala ixesha elide kwi-relationship ukuba ithathe isigqibo sokuba nomntu. Akayi kunikezela ekuqaleni kobunzima kwaye uya kuzithemba iimvakalelo zakhe ngaphandle kwamathandabuzo. Kwiimeko ezininzi uya kuhlala ezolile kwaye azame ukubonisa indlela efanelekileyo yokusombulula nawuphi na umcimbi kubomi beqabane lakhe okanye kubudlelwane babo. Xa enikezela ngokugqithisileyo, ecinga ukuba ufumene uthando lobomi bakhe, kukho ithuba elikhulu lokuba agxininise kakhulu kwiqabane lakhe elingenakho ukuguqukela kuye kwaye azakhele ubomi bakhe.
Ngaba unokumthemba wakhopound indoda
Le yindoda enokuthenjwa. Ngamaxesha athile. Akanguye umlinganiswa wakho wesiqhelo ongashukumiyo ongasoze aqhathe. Kukhangelo lwakhe lobunye unokutshintsha amaqabane ambalwa kakhulu, amanye edibana ngexesha. Ingxaki eyongezelelekileyo yokuthembela kwindoda yaseLibra kukungazithembi, kumenza azibuze zonke izigqibo ekufuneka izenzile. Ngamanye amaxesha uya kunikezela kwimigaqo yakhe ukuze afumane isiqinisekiso somtsalane wakhe kunye namandla akhe okuphumelela intliziyo yomntu. Nangona kunjalo, ukuba ngokwenene uthatha isigqibo sokuba ufuna ukuba nawe ngokukodwa, akasayi kuze aphule isithembiso sakhe sokunyaniseka, ngokude nje enikwe umfanekiso wothando olugqibeleleyo alubhalisele.
Ukhaliphile, unobuchule, unxibe kakuhle kwaye uziphethe kakuhle, kwaye kunjalo, kwiimeko ezininzi, ukhetha iqabane elichasene ngqo. Oku kunokuba yingxaki ukuba uqala ukuxelela indlela yokugqoka okanye ukuziphatha, kuba oku kuthetha kuphela ngendlela yakhe yokondla i-ego yakhe ephukile. Akukho qabane lifuna ukuba kwesi sikhundla kunye nendoda yaseLibra. Ngemida ebekwe ngokucacileyo kunye nentlonipho eyaneleyo, uya kukusa kwiindawo ezintle, iigalari zobugcisa, indawo yemidlalo yeqonga kunye nezihlandlo apho kufuneka unxibe. Uthanda ukwenza umfanekiso othile kwaye eyona ndlela ingcono yokuthandana naye kukubonisa ukuqonda ngesidingo sakhe sokubonisa uthando lwakho kwihlabathi liphela. Uya kufuna ukujongwa, ukuxatyiswa, ukuphululwa nokuchukunyiswa esidlangalaleni, nangona enokuba nengxaki yokubonakalisa uthando lwakhe phakathi kwabanye abantu.
Indoda yaseLibra ayilula ukuyiqonda. Indima yakhe emhlabeni kukufumana ulungelelwaniso jikelele kwaye kufuneka ubone ukuba sinzima kangakanani na esi sabelo. Kufuneka agwebe, asibonise ubunzima beMiphefumlo yethu kwaye anikezele kubulungisa obupheleleyo. Uxanduva oluninzi lumenza angakwazi ukwenza izigqibo ngendlela emangalisayo, kuba uyayiqonda into abaninzi bethu abangayenziyo - uxanduva lwakhe ngesigqibo ngasinye asenzayo kunye neseti yeziphumo ezinokulandela. I-ego yakhe igruzukile kwaye izinto eziphambili kuye zibonakala ngathi ziyaguquguquka, ngelixa enokuphulukana nesimilo sakhe kunye neminqweno yakhe, ngenxa yesidingo sokukholisa abanye. Ukuze ufumane uxolo, le ndoda kufuneka iphule konke ukuxhomekeka kwayo, ikwazi ukuba yedwa, kwaye ishiye nawuphi na umfanekiso okanye imbono abantu abanokuba nayo ngaye ngaphandle koloyiko. Kufuneka azazi ukuba ungubani ngaphandle kwempembelelo yabanye.
pound indodaUkuthandwa nokungathandwa
Usenokubonakala njengomntwana othukwayo, engazi nakancinane iimvakalelo zomnye umntu kwelinye icala, yaye elazi ngokupheleleyo ihlabathi kunye nendlela yokufikelela ulungelelwano kwelinye. Usenokungabi nantlonelo ngeyona ndlela intlekisayo, engenzi nto, maxa wambi engaqondwanga kumntu athandana naye, kodwa unokubonisa ukuqonda okumangalisayo kwabo abathandayo ukuba wenza iqhina eliqinileyo ngokweemvakalelo.
Indlela yokukhetha isipho sakhopound indoda
Mhlawumbi uya kufuna into ebiza kakhulu. Nokuba akabonakali ngathi luhlobo lwempahla, iseti yee-headphones ezimnandi, ikhamera ebiza imali eninzi yobuchwephesha okanye izihlangu ongenakuze uzithenge ngelo xabiso, ziya kumenza azive exatyisiwe kwaye enebhongo. Uhlala efuna into ekhangeleka kakuhle, enemigca elula kunye nemilo edikayo ephakathi kunye neseti yemibala. Ke yiya kwi-beige, grey okanye emnyama namhlophe ukuba awuqinisekanga ngokhetho lwakhe. Okunye okuluhlaza okuphakathi kunokuba luncedo nako. Isipho esigqibeleleyo kuye sidinga ukulingana nobukhulu bakhe kunye nengqondo yakhe. Kufuneka ivuselele ingqondo yakhe okanye ibe mhle ngokwenene kwaye ibe nencasa. Akunyanzelekanga ukuba isebenziseke konke konke, kuba nje imkhuthaza ngobuhle okanye ngokuyila kokwenyani.
Iponti Khetha Uphawu Khetha Uphawu Aries I-Capricorn